Dowlada Federaalka oo wafdi wasiiro ah u dirtay Baydhabo – idalenews.com
Dowlada Federaalka oo wafdi wasiiro ah u dirtay Baydhabo
Dowlada Federaalka Somalia ayaa saaka wafdi heer wasiiro ah oo uu horkacayo wasiirka arimaha gudaha iyo federaalka Cabdullaahi Goodax Bare u dirtay magaalada Baydhabo. Ujeedka wafdiga wasiirka gudaha & arrimaha federaalka ayaa lagu sheegay sidii ay odayaasha dhaqanka iyo ergada shirka dowlada goboleedka KG Somalia ugu qancin lahaayeen in ay hakiyaan dhismaha maamulka lixda gobol, sidoo kale ay u qiimeyn lahaayeen shirweynaha ka socda xarunta ADC ee magaalada Baydhabo oo haatan isagu gaarey marxaladiisii ugu dambeysay, dhowaana la filaayo in halkaasi looga dhawaaqo madaxweyne iyo labo ku xigeen oo dowlada KG yeelato.
Wafdiga Wasiirka arimaha gudaha Goodax Barre oo ka kooban 5 wasiir ayaa waxaa ku jira afar wasiir oo ka soo jeedo gobolada Bay iyo Bakool kuwaasoo kala ah wasiirka Gaadiidka Badda Yuusuf Baadiyoow, Wasiirka Ganacsiga & Warshadaha Aadan Saransoor, Wasiirka Gaashaandhiga Maxamed sheekh Xasan xaamud & Wasiirka hiddaha iyo tacliinta sare, Ducaale Aadan Maxamuud.
Dowlada Federaalka oo iyadu aad ugu soo horjeeda dhismaha maamul ka kooban lix gobol ayaa waxay waqtiyadii ugu dambeeyey ku howlaneyd sidii ay u dhicisayn laheyd shirka maamul u sameynta lixda gobol oo muddada sanadka ah loo fadhiyey xarunta ADC ee magaalada Baydhaba.
Wasiirrada ayaa durbaba la kulmay ergada shirka la doonayo in maamul loogu sameeyo lix gobol oo ka tirsan Soomaaliya, sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka arrimaha gudaha Cabdullaahi Goodax Barre.
Waxaa lagu wadaa inay isla maanta la kulmaan ergada shirka la doonayo in maamul loogu sameeyo saddex gobol.
Wafdiga ayaa degan Hotel Bakin waxaa dadka magaalada Baydhaba ay eegayaan qorshaha imaatinka wasiiradaan, kulamada ay la yeelanayaan qeybaha kala duwan ee shacabka. Waxaana la filayaa in ay degmada Baydhabo ku sii sugnaadaan ilaa maalinta berito ah ka dibna ay dib ugu noqdaan magaalada Muqdisho.